यी बालबालिकाका लागि राज्यले दया गर्ने हो ? (सम्पादकको कलम) | Ketaketi Online
Home » यी बालबालिकाका लागि राज्यले दया गर्ने हो ? ...
यी बालबालिकाका लागि राज्यले दया गर्ने हो ? (सम्पादकको कलम)
posted by ketaketionline on Sun, 07/11/2021 - 09:58
कोरोना महामारीबाट अभिभावक गुमाएका बालबालिका तीन हजार भन्दा बढी रहेका छन् । ती बालबालिकाका लागि सहयोग कार्यक्रम अहिले स्थानीय निकाय नगरपालिकाहरुले आआफ्नो इच्छा अनुसार सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षा र मासिक सहयोग कार्यक्रमहरु घोषणा भएका देखिन्छन् । यस विषयमा स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको कुरा सुन्दा लाग्छ उनीहरुले दया गरेर यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । तर यस सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाले स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने यो कार्य सरकारको दायित्व हो । यस कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन देशभरि नै एउटै नीति हुनु आवश्यक छ । अहिले भइरहेको अभ्यासमा कतै शैक्षिक सहयोग गर्ने र कतै मासिक सहयोग गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ ।
तर यस सहयोग कार्यक्रमलाई एउटै नीति बनाएर संवोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अभिभावकविहीन भएका बालबालिकालाई सकभर उनीहरुकै समुदायको नजिकको आफन्तकोमा व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । उनीहरुको जन्मगाउँबाट नै विस्थापित गरेर बालगृहमा संरक्षण गर्नुभन्दा स्थानीय निकायले नै नजिकका जिम्मा लिन चाहने आफन्त पनि नभएको अवस्थाका बालबालिकालाई स्थानीय मानवसेवीहरुकै पहलमा बालगृह स्थापना गरी संरक्षण प्रदान गरिनु उचित हुने देखिन्छ ।